Zimbabwe: ED Texts Charm Zanu-PF Candidates - allAfrica.com
Zimbabwe: ED Texts Charm Zanu-PF Candidates
President Mnangagwa has sent text messages to Zanu-PF candidates for the forthcoming harmonised elections, urging them to push the party's election agenda, centred on development and serving the people. The President, who is also Zanu-PF First Secretary and the party's Presidential candidate in the July 30 elections, sent the text messages on Monday.
Zanu-PF National Assembly candidate for Bulawayo Central Cde Mlungisi Moyo said he was charmed and motivated after receiving the message.
"The message was saying: 'Congratulations Cde Mlungisi Moyo for winning the primary and representing the party in Bulawayo Central Constituency. We will focus on developmental issues. Thank you very much. From President Emmerson Dambudzo Mnangagwa," said Cde Moyo.
Cde Moyo said under former President Mr Robert Mugabe party members never felt recognised or appreciated by the Zanu-PF leader.
Cde Moyo said the President's message is in sync with the Zanu-PF manifesto.
Pelandaba-Mpopoma Zanu-PF candidate Cde Joseph Tshuma said he was overwhelmed after receiving a message from the President.